Hoyga / Featured, Ciyaar3, Halxiraalaha / Xisbiga Barkadda
Featured Ciyaar3 Halxiraalaha
ciyaar3 mobilka xujo softgames
Xafladaha barkadu waa madadaalo qof walba, oo hadda xitaa waa la heli karaa ciyaar ahaan! Ciyaartaan xiisaha badan-3 ee loogu yeero Pool Party waa inaad ku ciyaartaa heerar kala duwan oo aad la socotaa bahal yar oo dhex mara beerta biyaha. Ma gaari kartaa ilaa dhamaadka? Ciyaar maalin kasta si aad u dhammaystirto caqabadaha maalinlaha ah ee waaweyn oo aad u kasbato gunno.
Ciyaar 3 ciyaartu waxay ka bilaabantaa loox qasan. Hawshaadu waa inaad abuurto saf 3 dusiyo iyagoo si xariifnimo ah isku weydaarsanaaya dhoobada, dabadeedna safku wuu baaba'aa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad maamusho inaad abuurto isku xigxig ka badan 3 gogo ', xoojiye ayaa ku sii jira sabuuradda, kaas oo kaa caawiya inaad guulaysato.
Isku day gacantaada caqabadda weyn ee beer -biyoodkaan hadda! Baashaalkan midabka leh wuxuu ku habboon yahay dhex-dhexaadka, whether you're on the go or at home. Markaad sii maamusho si aad u gasho baarkinka, dhiirrigeliyeyaasha aadka u cajiibka badan iyo abaal -marinnada aad heli doonto. Ururi qadaadiic badan oo ku ciyaar heerar badan!